ဦးဝင်းတင် (၁၉၃ဝ – ၂၀၁၄) | MoeMaKa Burmese News & Media
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:U Win Tin, မှတ်စုမှတ်တမ်း, လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ, သတင်းပဒေသာ, ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်, ဦးဝင်းတင်
3 Responses to ဦးဝင်းတင် (၁၉၃ဝ – ၂၀၁၄)
kyawkyar on April 21, 2014 at 9:49 am
Do wish you haveanoble AFTER-LIFE.
with full respect !!
aung myint kyi on April 21, 2014 at 2:03 pm
Very sad for aba u win tin same all the rest people.Aba may reach good place.
Thet Naing on April 21, 2014 at 8:12 pm
ဆရာကတော့ ” ကျားဆိုမှကျား” ပဲဗျာ။